Shina legioma legioma fanamboarana sy orinasa | Lonovae
Ny sobika mitaona legioma dia apetraka amin'ny supermarket, hypermarket, trano fanatobiana entana ary logistika. Misy fomba roa fametrahana. Fomba fametahana rehefa mametraka zavatra, ary fomba fametahana rehefa mitatitra frame. Izy io dia ampiasaina hanangonana legioma, voankazo, tsakitsaky ary zavatra hafa tokony hapetraka.
Famokarana Voankazo voankazo-01
lafiny 600 * 400 * 105mm
Fonosana 18pcs / baoritra
COLOR Mainty (azo namboarina izy io.)
Famokarana Voankazo voankazo legioma-02
lafiny 600 * 400 * 195mm
Fonosana 16PCS / CARTON
Famokarana Voankazo voankazo-03
lafiny 600 * 400 * 245mm
Fonosana 14PCS / CARTON
Colot Mainty (azo namboarina izy io.)
Famokarana Voankazo voankazo legioma-04
Loko Mainty (azo namboarina izy io.)
Tombony ny harona fametahana legioma
1.Ny tahiry fitaterana: afaka mamonjy 70% ny sandan'ny fitaterana sy mitahiry ny habakabaky ny entana.
2ny fihenan'ny saram-pitehirizana: afaka mamonjy 70% ny sandan'ny fitahirizana.
3. Izy io dia famolavolana vaovao, misy karazany ny asany.
4.We ampiasainay ireo fitaovana vaovao pp hamokarana fa tsy ireo namboarina mba hahafahanay maka antoka ny kalitaony.
5. Izahay koa dia mandalo ny rafitra fitsapana SGS hahazoana antoka ny kalitaon'ny fitaovana virjina sy ny vokatra.
6.Mampiasa ny tsindrona iray manontolo indray mandeha isika, mba hahafahantsika manamboatra harona vaovao ho an'ny fanapahana malama sy endrika tsara tarehy, tsy misy sisiny henjana.
7.One boaty iray dia mety mavesatra mavesatra noho ny hafa, mampiasa ny endrika vaovao izahay ary manampy andalana bebe kokoa amin'ny ambany.
8. Ary azontsika atao ny manamboatra ny mpanjifa hanonta ny logo misy azy ary misy tahiry ampy azo omena ara-potoana.
Ny boaty legioma dia azo ampiasaina amin'ny legioma, voankazo, kilalao, zava-pisotro, vatomamy sy izay entana tadiavinao ao amin'ny magazay lehibe, toeram-pivarotana, fivarotana ary fivarotana sns.
Momba ilay orinasa
Lonovae izahay dia manana milina fanindronana am-polony sy lasitra dimam-polo hahafeno ny fepetra takiana aminao. Afaka mitaona harona mihoatra ny iray alina izahay hamokarana. Ary manana serivisy fivarotana fivarotana enina ambin'ny folo taona izahay, ao anatin'izany ny vovoka herinaratra mahery, talantalana entana ary harona azo henoina sns. Ary ho an'ny kalitao dia mampiasa ny garanules PE vaovao virjiny avy any China-Korea Petroleum Corporation izahay. Ary ny momba ilay toerana, izahay dia ao amin'ny Yangtze River Delta, akaikin'i Shanghai, ary misy lalan-dranomasina maro eto. Mety sy haingana amin'ny fitaterana izany.
Manaraka: Takelaka biogas HDPE